ငါ "အောက်တွင်" ရှေ့တျော၌အကော်မာလိုအပ်ပါသလား? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
ငါ "အောက်တွင်" ရှေ့တျော၌အကော်မာလိုအပ်ပါသလား?
နေ့သည်ကောင်းသော။ နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုခင်မှာ quote; sootvetstviiquot ပြခြင်း, ကော်မာထားသော်လည်းမအမြဲနိုင်ပါသည်။ အကယ်. စကားလုံး quote; sootvetstviiquot ပြခြင်း, ပြေး-in ကိုစောင်ရေဝါကျ၏အဓိပ္ပါယ်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရမထားခြင်းမရှိဘဲ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, ထို့နောက်သူကကော်မာကိုဆိုလိုတာပါ။ အခြားဖြစ်ရပ်များမှာဆင်ခြေဆင်လက်အထီးကျန်မပေးပါ။
collocation နှင့်အညီ တစ်ခုခု (အဆာပကိစ္စတွင်အတွက်နာမ်လိုအပ်ပါတယ်) ကိုနာမ်ငာကနေဆင်းသက်လာခံရဖို့စဉ်းစားသည်။
တစ်ခုဆင်ခြေသည်မှန်လျှင်, ဤကိစ္စတွင်အတွက်: သို့သော်လည်းဒါခေါ်ရွေးချယ်နိုင်အသုံးပြုမှု pproizvodnyh ဆင်ခြေ၏အမှုများကိုရှိပါတယ် နှင့်အညီအတွက်တစ်နာမ်နှင့်အတူအသုံးပြုသောသည် midsentence, ထိုသို့သောလည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်ကော်မာခွဲဝေဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီမှာပြီးသား၏ပေါင်းစပ်တကယ်တော့အကြောင်းကိုစာဖြင့်ရေးသားထားပြီး အညီ ဝိဘတ်သည်နှင့်အညီတစ်ဦးဆင်းသက်လာတဲ့အဘို့ကိုကိုက်ညီတဲ့လိမ့်မည်။ ဥပမာ: ဒီအစီအစဉ်ကိုရန်နှင့်အကြံအစည်နှင့်အညီအရသိရသည်။ Sun ကစစ်မှန်တဲ့။ ကျနော်တို့ကအဆုံးအစအဦးမှာမဟုတျဘဲတည်ရှိမဟုတ်ပါလျှင်အသနားခံအတူတကွတစ်ကော်မာနှင့်အတူနှစ်ဖက်စလုံးကနေမှီခိုစကားလုံးများကို (ဤအရပ်မှအဆိုပါကော်မာများနှင့်လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်မီနှင့်ပြီးနောက်ရုံအောက်မှာမတိုင်မီ ie) ၏လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်အတူရပ်တည်ဟုချေါသောဤအသေးစားဒီဇိုင်း, အဆိုပြုချက်များနှင့်အလယ်၌တည်၏။ ဥပမာ: ဒီနေ့ရှေ့တော်၌ထိုနေ့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့မူလစိတ်ကူးနှင့်အညီ, ကျွန်တော်တစ်ဦးကြံစည်မှုဆည်မြောင်းလုပ်နေကြသည်။ သငျသညျမွငျအောကျတှငျရှေ့တော်၌ကော်မာလည်းမရှိ။ အဆိုပါထားသောစာပိုဒ်တိုများကျွန်တော်တို့ရဲ့မူရင်းစိတ်ကူးနှင့်အညီအတွက် preposition စောင်ရေများတွင်ပါဝင်သည် pozavcherashny အဖြစ်ကော်မာပြီးနောက်တစ်ဦးကစက္ကန့်စကားလုံး, စိတ်ကူးများဖြစ်ပါတယ်။
အချို့သောအကြောင်းပြချက်များအတွက်အငြင်းအခုံ၏ပထမအစိတ်အပိုင်းကိုငါတို့သည်အညီ esch အတွက်ထည့်သွင်းခဲ့ကြကြောင်းမှတ်ချက်နှင့် сဒါကြောင့်တစ်ဦးမဖြစ်မနေဒြပ်စင်တစ်ခုဖြစ်သည်လျှင်အဖြစ်။ သူတာဝန်တစ်ခုမကြာခဏ, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ပါဘူး။ ထိုသို့ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေနှင့်ဆင်ခြေလိမ့်မည်မဟုတ်ပေလျှင်။ ဤရွေ့ကား, ပုဒ်ဖြတ်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောလမ်းစီစဉ်မည်ဟုဆိုလိုသည်။
ဤတွင်အသုံးပြုမှုသရုပ်ဖော်တဲ့သေးငယ်တဲ့စာသားကိုအဘယ်သူမျှမနှင့်အတူအညီဖြစ်ပါတယ်။ စကားမစပ်မေးခွန်း့အကြောင်းမှာအားလုံးဖော်ပြခဲ့တဲ့မပေးပါ။ အဘို့ဒီတော့အတွေးအခေါ် tekstik နမူနာа: တိုင်းမဆိုချိန်ခွင်လျှာနှင့်သဟဇာတတစ်ခုခု၏ဝိသေသလက္ခဏာအောက်တွင်သို့မဟုတ်နှင့်အိပ်ကြ၏။ ချိန်ခွင်လျှာစာရွက်မှာတော့သဟဇာတနှင့်အညီအသက်တာ၌ကောင်းသောရှိသေး၏။ သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့, အဆိုအရအားလုံးဆင်ခြေမဖြစ်ပေမယ့်သာမန်နာမ်လိမ့်မည်။ က IDT ရုံစာကြောင်းများအလယ်မှာအကြောင်းကိုပေမယ့်ရှေ့မှောက်၌အဘယ်သူမျှမကော်မာ, မလိုအပ်အဆိုအရသိရသည်။
ပေါင်းစပ် quote; squot အညီ; ဒါဟာအက္ခရာပေါ်မှာကော်မာအဖြစ်မပါဘဲရပ်နိုင်, ထွက်ရပ်မငာဆောင်ရွက်သည်။
သာအထူးကိစ္စများတွင်လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံဝိဘတ် Quote တွဲသောအခါ, sootvetstviiquot ပြခြင်း, ဒါဟာနိဒါန်းဖြစ်ပါတယ်စာကြောင်းများအလယ်၌တည်ရှိသည်။ ဤတွင်ထိုကဲ့သို့သောအမှုငါ၏ဥပမာဖြစ်ပါသည်:
Quote; ငါနိုင်ငံသားများ၏ကိုယ်ကျင့်တရားတာဝန်နှင့်အညီ, ရဲမခေါ်ချင်ခဲ့တယ်, ဒါကြောင့်ပြုသည်ကိုပါပြီသင့်တယ်, ဒါပေမယ့်လက်ကဖုန်းမှ doshli.quot ကြသည်မဟုတ်,
62 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,450 စက္ကန့်ကျော် Generate ။